Las vegas unzip 3 afọ 1 izu gara aga #769
Ndewo, ebudatala LV na PC dị iche iche atọ (akwakọtara 3GB). Site na iji Winrar, ọ ga-ewepu faịlụ 4.05x.tiz yana faịlụ 6x.exe. N'okwu ọ bụla na-ekwu na Archive bụ ihe rụrụ arụ ma ọ bụ nwere ụdị faịlụ amaghị ama. Unzipper ọzọ ọ ga-enwe ihe ịga nke ọma karị? Ọ bụrụ etu a, olee nke, biko?
Las vegas unzip 3 afọ 1 izu gara aga #770
Daalụ natara: 54
Ndewo na nnabata gị Rikoooo. Biko ị nwere ike ị biputere nke a n'okpuru FSX,FSX Steam sub-nwee nnọkọ? Isi okwu a bụ maka ndị otu Rikoooo Forum ịmebata onwe ha.
Las vegas unzip 3 afọ 1 izu gara aga #772
Las vegas unzip 3 afọ 1 izu gara aga #773
Enwetara m nke a n'ụzọ dị irè, Enwetara m ya edozi site n'iji Izarc:
Download na wụnye freeware Izarc www.izarc.org/ pịa pịa pịa Archive họrọ "Izarc" na "Wepụta gaa las_vegas_mega_photoreal_scenery"
Ugbu a ọ na-arụ ọrụ
Agaghị m ebubata ebe nchekwa ọhụrụ na Rikoooo ya n'ime awa ole na ole ọ ga-edozi maka onye ọ bụla.
Ndoo maka nsogbu ahụ, ọ naghị adịrị mfe ịnagide nnukwu faịlụ,
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: nkịta